Muxuu yahay qorshaha ay Qadar maalgelineyso kahor shirka Dhuusamareeb?
Qorshaha ay Qadar iibineyso kahor wejiga 3aad ee shirka Dhuusamareeb
MUQDISHO, Soomaaliya - Qatar safiirkeeda u fadhiya caasimada Soomaaliya ee Muqdisho ayaa olole siyaasadeed ugu jira in Villa Soomaaliya hesho kororsiimo ka hor inta uusan dhamaan muddo xileedka madaxweyne Farmaajo.
Xasan Bin Xamsa ayaa asbuucaan gudiihiisa kulamo gaar gaar ah la qaadanaya Madaxweynayaasha Galmudug, Koonfur Galbeed iyo HirShabelle, isagoo ka shaqeynaya in ay mowqif la noqdaan dowlada Federaalka ah.
Xukuumada Dooxa oo Malaayiin dollar ku bixineysa sidii talada dalka ugu hayn laheyd madaxweyne Farmaajo ayaa ka shaqeyneysa in madaxda sadexdaan maamul aytageeraan qorshaha dowlada ee kororsiimada marka dib la isugu soo noqdo wejiga saddexaad ee shirka Dhuusamareeb.
Villa Soomaaliya ayaa xusul-duub ugu jirta in go’doomin siyaasadeed ku sameeyaan madaxda dowladaha Puntland iyo Jubaland.
Bin Xamsa ayaa inta aan xilka laga tuurin Khayre bil ka hor kulamo la qaatey Gudoomiyaha Aqalka Hoose ee Soomaaliya, iyadoo la rumeysan yahay inuu kala hadlay barnaamijka xilka lagaga tuurey Xasan Cali Khayre.
Khayre ayaa inta uusan ka qayb galin kulanka Dhuusamreeb safar ku tagey dalka Qatar iyadoo warar lagu kalsoon yahay u sheegeen GO in madaxda Doha u soo bandhigeen inuu is-casilo lacagna qaato si xilka RW loo siiyo mucaaradka dowlada oo diidan korirsiimada balse sida xoguhu xusayaan, waa ka biyo diidey.
Qadar ayaa caan ku ah faragalinta arimaha gudaha wadamo badan oo ka tirsan Jaamacada Carabta kuwaas oo qaarkood dagaal sokeeye ka dhacey.
Turkiga ayaa kamid ah wadamada xulufada siyaasadeed la ah Qatar oo ay cunaqabateeyeen Sacuudiga, Imaaraadka iyo dala kale oo Carbeed.
Turkiga iyo Imaraadka Carabta ayaa qarka u saaran iney isku farasaaraan dalka Liibiya halkaas oo dagaal sokeeye ka socda tan iyo markii kacdoon xilka looga xayuubiyey hogaamiyihii mayalka adkaa ee Muammar al-Gaddafi.
Madaxda maamulada oo mowqif mideysan ka qaatay doorashadda
Soomaliya 11.07.2020. 15:10
Qodobkaan waa ajendaha ugu muhiimsan ee shir-madaxeedkaan soconaya maalmaha soo aadan.
Nuxurka Khudbadihii Madaxda maamulada ka jeediyeen Aqalka Sare
Soomaliya 06.11.2017. 16:22
War Saxaafaded 18.02.2019. 17:20
"Galmudug ma ahan mustacmarad, waa maamul madax banaan"
Soomaliya 20.06.2019. 15:56
Koonfur Galbeed oo cambaareysay dil shan ruux loogu geystay Galmudug
Soomaliya 13.06.2019. 17:17
Hooyo iyo caruurteeda oo xabsi loogu taxaabay dilka aabaha qoyska 30.09.2020. 18:00
Dooda doorashada Mareykanka: Trump iyo Biden oo is-aflagaadeeyay 30.09.2020. 16:15
India oo lagu cambaareeyay sii deynta shaqsiyaad "burburiyey" Masjid 30.09.2020. 15:00
Wadahadalka doorashada oo dib u billowday xilli waqtiga dhamaanayo 30.09.2020. 11:31
Ajnabigii baahiyey muuqaalkii ugu horeeyay ee Al-Shabaab faafisay 30.09.2020. 10:30
Carro ka dhalatay hadal uu Farmaajo ku duray wariyeyaasha Soomaaliya 30.09.2020. 09:00